ပြင်သစ်အသင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၆)
28 Jun 2018 . 2:03 AM
ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းအရေအတွက် (၃၂)သင်းကို စတင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ကို ရရှိခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့ပြီး ရွှေဂိုးစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။ ခြေစစ်ပွဲကို နိုင်ငံပေါင်း (၁၇၄)နိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ပြိုင်ပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ကာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်း ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး ဒေဗာဆူကာရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ခရိုအေးရှားအသင်းဟာ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ နာမည်ကြီး ဂျာမနီအသင်းကို (၃-၀)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာတော့ အိမ်ရှင်ပြင်သစ်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ တတိယနေရာလုပွဲနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။ တတိယနေရာလုပွဲမှာလည်း နယ်သာလန်အသင်းကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူကာ ခရိုအေးရှားအသင်း တတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ အိမ်ရှင်ပြင်သစ်အသင်းနဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းက (၃-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူကာ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အိမ်ရှင်ပြင်သစ်အသင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ရောက်မှ လက်ရှိချန်ပီယံ ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် ပွဲစဉ်ရေးဆွဲရာမှာ မသမာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၇)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Host Country – France
Dates – 10 June – 12 July (33 days)
Venue(s) – 10 (in 10 host cities)
Champions – France (1st title)
Third Place – Croatia
Fourth Place – Netherlands
Attendance – 2,784,687 (43,511 per match)
Top Scorer(s) – Davor Šuker (Croatia) –6goals
Best Player – Ronaldo (Brazil)
Best Young Player – Michael Owen (England)
Best Goalkeeper – Fabien Barthez (France)
Fair Play Award – England, France
Photo:Life Of Madridista, Telegraph, Twitter
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၆)
ပွိုငျပှဲဝငျ အသငျးအရအေတှကျ (၃၂)သငျးကို စတငျပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ပွငျသဈနိုငျငံက ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ကို ရရှိခဲ့တယျ။ ပွိုငျပှဲကငျြးပပုံအဆငျ့ဆငျ့ကိုလညျး လကျရှိကငျြးပနတေဲ့ ပုံစံအတိုငျး ပွောငျးလဲကငျြးပခဲ့ပွီး ရှဂေိုးစနဈကို စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈတယျ။ ခွစေဈပှဲကို နိုငျငံပေါငျး (၁၇၄)နိုငျငံမှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး ပွိုငျပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျကာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျး ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈတယျ။ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး ဒဗောဆူကာရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ခရိုအေးရှားအသငျးဟာ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ နာမညျကွီး ဂြာမနီအသငျးကို (၃-ဝ)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပွတျအနိုငျယူခဲ့ပွီး ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဆီမီးဖိုငျနယျမှာတော့ အိမျရှငျပွငျသဈအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ တတိယနရောလုပှဲနဲ့ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။ တတိယနရောလုပှဲမှာလညျး နယျသာလနျအသငျးကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူကာ ခရိုအေးရှားအသငျး တတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ အိမျရှငျပွငျသဈအသငျးနဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးက (၃-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူကာ ကမ်ဘာ့ဖလားကို ပထမဆုံးအကွိမျ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ အိမျရှငျပွငျသဈအသငျးဟာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ရောကျမှ လကျရှိခနျြပီယံ ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့ တှဆေုံ့ဖို့အတှကျ ပှဲစဉျရေးဆှဲရာမှာ မသမာမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၇)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ